Ikozvino izvo TPE zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hupenyu, zvinogona zvakare kuonekwa kuti TPE zvigadzirwa zvave zvishoma nezvishoma zvave kudikanwa muhupenyu hwedu, saka chii chiri tpe mbishi zvigadzirwa? TPE inogadzirwa sei? Kubva pane izvi kuti unzwisise:
TPE (Thermoplastic Elastomer) imhando ye thermoplastic elastomer zvinhu. Iyo ine hunhu hwesimba rakakwira, yakasimba kugadzikana, jekiseni kuumbwa maitiro, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, isina-chepfu uye yakachengeteka, hwakawanda hweukukutu, hwakajeka colorability, kupfava kubata, mamiriro ekunze kusagadzikana, Kuneta uye kupisa tembiricha, yepamusoro kugadzirisa kuita, hapana chikonzero vulcanization, inogona kushandiswazve kudzikisira mutengo, inogona kuve maviri-akapfura jekiseni kuumbwa, akafukidzwa nePP, PE, PC, PS, ABS uye zvimwe matrix zvinhu, kana inogona kuumbwa zvakasiyana.
TPE inogona kushandiswa muzvigadzirwa zvemucheche, zvekurapa zvekushandisa, zvigadzirwa zvepamusoro-soro, nezvimwewo senge vana pacifiers, ekurapa infusion seti, makirabhu egorofu, nezvimwewo, asiwo akakodzera kugadzirwa kwezvinhu zvemotokari.
Zvakanakira TPE zvinhu:
TPE inogona kusanganisirwa neforoma yejekiseni kuumbwa, kubvisa kushandiswa kwezvokuwedzera zvakadai seglue, kuitira kuti izvo zvinhu zvisakanganiswa nezvinhu zvekunze, saka hapana kunhuhwirira kunoshamisa uye hakuna kutsamwa kune muviri wemunhu. Kune mhuri dzine vakadzi vane nhumbu nevacheche, zvigadzirwa zvakachengeteka nharaunda uye zvakachengeteka zvigadzirwa zve TPE zvakare zvakakosha kwazvo.
TPE parizvino inozivikanwa pasi rese zvinhu zvine hushamwari, uye zvigadzirwa zve TPE zvinotora chinzvimbo chakakura mumusika weEuropean neAmerican auto. Saka isu tinoshandisa TPE zvinhu mune zvigadzirwa zvedu.
Zvichienzaniswa neyechinyakare yakakura-yakavharirwa matehwe emotokari emota achishandisa kukanda uye kwetekinoroji yekugadzira tekinoroji, TPE mota mateki anogona kutora yakasanganiswa jekiseni kuumbwa maitiro eiyo mold. Iyo nzira yekugadzirisa inobvisa kushandiswa kwezvokuwedzera zvakadai seglue uye formaldehyde, kuti iyo TPE mbishi zvinhu zvisakanganiswa nezvinhu zvekunze, uye isina hwema hunoshamisa. Zvinhu zvine njodzi zvinogadzirwa uye hazvikurudzire muviri wemunhu, zvichiita kuti matare emota awedzere kugarisana uye agare.
TPE zvinhu zvine yakanaka mvura kuramba.Iyo inogona kushambidzwa yakanangana nemvura kuti ive iri nyore care.Compared nedambudziko redzi yechinyakare nedehwe mota mateti ayo asingakwanise kushambidzwa, TPE mota mateti anogona kushambidzwa zvakananga nepfuti yemvura, uye inogona kutakurwa mukati mota mushure mekuomeswa. Izvo zvakare zviri nyore kutarisira.
Deao mateki emota zvakare ane yakasarudzika arc-yakasarudzika diki yepamusoro divi uye pateni diversion groove dhizaini, iyo inogona kuchengetedza iyo suede mukati memota ichinyatso kudzivirira matangi emvura kudurura mumota.
Izvo zviri pamusoro ndiko kuiswa kweizvo TPE zvigadzirwa zvakagadzirwa. Tichiona pano, isu tinogona kunyatsonzwisisa iyo synthesis ye TPE mbishi zvigadzirwa uye zvimwe zvehunhu hwavo, kuti tikwanisewo kunzwisisa yakafara tarisiro yezvinhu zve TPE zvigadzirwa.